အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ဖူးရင် မဖြစ်မနေ ကြည့်သင့်တဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ထပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး – Cele Gabar
ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း မပြောခင်မှာ မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးပါရစေ….။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အဖေတွေက ပရိသတ်တို့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ် ထင်ပါသလဲ?? အဖေရဲ့ မေတ္တာကို အလုံးစုံ မရခဲ့လို့ အဖေ့ကို မုန်းနေမိပြီလား…။ ဒါဆိုရင်တော့ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်ကော အဖေကို ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ မချစ်တဲ့ သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့် မိသားစုလေး ပြိုကွဲခဲ့ပြီး ဖခင် မေတ္တာကို ငတ်မွတ်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး သုသုက အဖေဖြစ်သူ ကျော်ထက်အပေါ် သူစိမ်းတစ်ယောက်လို ပြောဆိုဆက်ဆံရုံကလွဲပြီး ဖခင်တစ်ယောက်လို မသတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့မှာတော့ ကံကြမ္မာရဲ့ ပေါင်းစည်းမှုကြောင့် ကျော်ထက်နဲ့ အတူ သမီးလေး သုသုတို့ ခရီးရှည်တစ်ခု အတူသွားဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဖခင်အပေါ်အမြင်မကြည်တဲ့ သမီးလေး သုသုနဲ့ တစ်လမ်းလုံး အဆင်မပြေခဲ့ပေမယ့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို သားအဖနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရချိန်မှာတော့ သမီးလေး ရှေ့မှာ တံတိုင်းကြီးတစ်ခုလို ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာ၊ အဖေဖြစ်သူကို အမြင်မကြည်ပေမယ့် အဖေ့ရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို လိုချင်နေတဲ့ သမီးလေး သုသု တို့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ကြည့်ရှူခံစားရမှာပါ။
အဖေ ဖြစ်သူနဲ့ သမီးဖြစ်သူကြားက တင်းမာနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ဒါရိုက်တာ အာကာက သေသပ်လှတဲ့ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားပြီး ကြည့်နေကြ ဇာတ်အေးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အက်ရှင် ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို လုံးဝအားရကျေနပ်မှု ပေးနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဖခင် မေတ္တာကို မတူညီတဲ့ ရှူထောင့် ကနေ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာစွာ ဖော်ကြူးထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ယခုနှစ်အတွင်းမှာ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား အဖြစ် ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အဖတေဈယောကျရဲ့ မတ်ေတာကို မေးခှနျးထုတျမိဖူးရငျ မဖွဈမနေ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ကမ်ဘာနှဈထပျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး
ဇာတျကားလေးအကွောငျး မပွောခငျမှာ မေးခှနျးလေးတဈခုလောကျမေးပါရစေ….။ ပရိသတျတှရေဲ့ အဖတှေကေ ပရိသတျတို့ကို ဘယျလောကျခဈြတယျ ထငျပါသလဲ?? အဖရေဲ့ မတ်ေတာကို အလုံးစုံ မရခဲ့လို့ အဖကေို့ မုနျးနမေိပွီလား…။ ဒါဆိုရငျတော့ အဖတေဈယောကျရဲ့ မတ်ေတာကို မေးခှနျးထုတျနတေဲ့ သူတှေ အတှကျကော အဖကေို ခဈြတဲ့ သူတှနေဲ့ မခဈြတဲ့ သူတှေ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားလေးတဈကားကို မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
အိမျထောငျရေးအဆငျမပွမှေုကွောငျ့ မိသားစုလေး ပွိုကှဲခဲ့ပွီး ဖခငျ မတ်ေတာကို ငတျမှတျခဲ့တဲ့ သမီးလေး သုသုက အဖဖွေဈသူ ကြျောထကျအပျေါ သူစိမျးတဈယောကျလို ပွောဆိုဆကျဆံရုံကလှဲပွီး ဖခငျတဈယောကျလို မသတျမှတျခဲ့ပါဘူး။ တဈနမှေ့ာတော့ ကံကွမ်မာရဲ့ ပေါငျးစညျးမှုကွောငျ့ ကြျောထကျနဲ့ အတူ သမီးလေး သုသုတို့ ခရီးရှညျတဈခု အတူသှားဖို့ အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတော့တယျ။ ဖခငျအပျေါအမွငျမကွညျတဲ့ သမီးလေး သုသုနဲ့ တဈလမျးလုံး အဆငျမပွခေဲ့ပမေယျ့ မထငျမှတျထားတဲ့ ပွဿနာတဈခုကို သားအဖနှဈယောကျရငျဆိုငျ ကွုံတှရေ့ခြိနျမှာတော့ သမီးလေး ရှမှေ့ာ တံတိုငျးကွီးတဈခုလို ကာကှယျပေးခငျြတဲ့ ဖခငျတဈယောကျရဲ့ မတ်ေတာ၊ အဖဖွေဈသူကို အမွငျမကွညျပမေယျ့ အဖရေဲ့ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုကို လိုခငျြနတေဲ့ သမီးလေး သုသု တို့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ဇာတျသိမျးလေးဖွဈလာနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို ရငျခုနျစှာနဲ့ ကွညျ့ရှူခံစားရမှာပါ။
အဖေ ဖွဈသူနဲ့ သမီးဖွဈသူကွားက တငျးမာနတေဲ့ ဆကျဆံရေးတဈခုကို ဒါရိုကျတာ အာကာက သသေပျလှတဲ့ ရိုကျကှငျးရိုကျကှကျတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားပွီး ကွညျ့နကွေ ဇာတျအေးပုံစံမြိုးမဟုတျဘဲ အကျရှငျ ဒရမျမာ ဇာတျလမျးအမြိုးအစားဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေို လုံးဝအားရကနြေပျမှု ပေးနိုငျမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါ။ ဖခငျ မတ်ေတာကို မတူညီတဲ့ ရှူထောငျ့ ကနေ ဇာတျလမျး ဇာတျအိမျခိုငျမာစှာ ဖျောကွူးထားတာဖွဈလို့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ယခုနှဈအတှငျးမှာ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ဇာတျကားတဈကား အဖွဈ ညှနျးဆိုပေးလိုကျပါတယျနျော။